နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များ ထောက်ပံ့ပေးအပ် | NLD
Home State Counsellor နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
Posted By: mygate wayon: အောကျတိုဘာ 20, 2018 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor NewsNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ၊ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းက လှူဒါန်းထားသည့် မူးယစ် ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမင်းသူတို့ နှင့် အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်ရှိ ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အား ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းတင်၊ ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးတူးဂျာ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ၊ တာဝန်ရှိသူများက မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်၌် ကြိုဆိုနှုတ် ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ရွှေမိုးတောင်စေတီတော်သို့ သွားရောက်၍ ပန်း၊ ရေချမ်းနှင့် ဆီမီးတို့ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး ဖူးမြော်ကြည်ညိုကာ စေတီတော်ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် စေတီတော်ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ဓမ္မာရုံ၌ ပြည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမိန္ဒနှင့် ပြည်နယ်သံဃ နာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိ ဘဒ္ဒန္တ ကေတုမာလာတို့ အမှူးပြု သည့် ဆရာတော်များအား ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ ရွှေစက်ရပ်ကွက်ရှိ တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ(လန်ဆယ်)၌ ကျင်းပသည့် တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများက “သူရဲကောင်း” နှင့် “ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို တည်ဆောက်စို့” သီချင်းများဖြင့် သီဆိုဧည့်ခံ ဖျော်ဖြေကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သြ၀ါဒ စကားပြောကြားရာတွင် “ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သီချင်းဆိုပေးတဲ့ ကလေးတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေဆိုတဲ့အခါမှာ ဘာကိုသတိထားမိ သလဲ ဆိုတော့ တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်းတွေ။ တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်း ဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့ ကလေးတွေ တစ်ယောက် ချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းဟာလည်း တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ကို တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုဒီစခန်းမှာဆိုရင် ကလေးတွေကို ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်တိုင်းပြည်အတွက်၊ အခြားပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက်၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေအတွက် ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိအောင် သုံးရမလဲ ဆိုတာတွေကို သင်ပေး နေတယ်လို့ ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့် တန်ဖိုးနဲ့ ကိုယ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီတန်ဖိုးကို နားလည်ဖို့လိုတယ်။ သိရှိဖို့လိုတယ်။ လေးစားဖို့ လိုပါ တယ်။ ဘယ်သူမှ ငါဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာ ထင်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ လူဖြစ် လာရင် တန်ဖိုးရှိလာပြီပဲ။ အဲဒီတန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်း၊ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသလား၊ မသုံးဘူးလား ဆိုတာက အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။
“သီချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတယ်ဆိုပေမယ့် သီချင်းတွေဟာ ဖျော်ဖြေမှု သက်သက် မဟုတ်ဘူး။ အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်။ နိုင်ငံ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ တန်ဖိုးတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ အများကြီးအားတက် ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေဟာ ဒီသီချင်းတွေဆိုတဲ့အခါကြရင် အဓိပ္ပာယ်တွေကို နှလုံးသွင်း ပြီးတော့ လေးလေးနက်နက် ထားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဆို နေတဲ့ သီချင်း ဟာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကို အဓိက မထားဘဲနဲ့ တေးသွားတွေကိုပဲ အဓိကထားမယ်ဆိုရင် မလုံလောက်ပါဘူး။
“အဓိပ္ပာယ်တွေကို အလေးထားဖို့ မမေ့စေချင်ပါဘူး။ ကလေးများဟာ ဒီလို သီချင်း တွေ သင်တယ်ဆိုရင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း သေသေချာချာ အဓိပ္ပာယ် ကို ရှင်းပြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကို ဘယ်လိုနားလည် လည်း ဆိုတာလည်း ပြန်ပြီးတော့ မေးစေချင်ပါတယ်။
“ဒီသင်တန်းက ကလေးတွေက တစ်ချိန်လုံး တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲ ကြားရပါတယ်။ ဒါဟာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု၊ ကြိုးစားမှုကြောင့်လည်း ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု၊ ကြိုးစားမှုကြောင့်လည်းပါတယ်။ ဒီအခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ လူကြီးတွေဖြစ်လာအောင် တချိန်လုံးကြိုးစားနေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ တချိန်လုံး ကြိုးစားမှဖြစ်မှာပါ။ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အဆုံးမရှိဘူး။ ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ အဆုံးမရှိလို့ ပင်ပန်းပါတယ်လို့လည်း မထင်ပါနဲ့။ မကြိုးစားဘဲနဲ့ ဒီလိုပဲ နေရတဲ့ဘ၀ဆို တာလည်း အနှစ်သာရမရှိပါဘူး။
“ဒီနေ့ ဒီအချိန်အခါမှာ ဆိုပေးတဲ့ သီချင်းလေးနှစ်ပုဒ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို တကယ်ပဲ နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီစွာ နေသွားမယ် ဆိုရင် ဒီအခန်း ထဲက ကလေးတွေဟာ ဘ၀မှာ တိုးတက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်တစ် ယောက်ထဲ အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်၊ ကိုယ့်ကမ္ဘာကြီးအတွက်၊ ငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာသစ်ပါ။ ကမ္ဘာသစ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံထဲ ငြိမ်းချမ်းလို့လည်း မလုံလောက်ဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးငြိမ်းချမ်းမှ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းမှာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့ အခြေအနေဆိုတာ တစ်ခါမှ ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ သမိုင်းမှာ မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒါက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတွေက ငြိမ်းချမ်း ချင်တဲ့ ဘက်ကို သိပ်မသွားလို့ပဲ။
“ဒီကလေးတွေရဲ့ ခေတ်မှာကြတော့ ပိုပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်မလားဆိုတာ ကလေး တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ငါတစ်ယောက် တည်း ဘာလုပ်လို့ရမှာလည်းဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတာ ခက်ပေမယ့်၊ ကိုယ့်နဲ့တွဲပြီးတော့ လုပ်နိုင်တဲ့အဖော်တွေ၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရှာပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေဟာ အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေဟာ ဒီလိုအရွယ်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လည်း ဒါကို တာဝန်တစ်ခုလို့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ် တိုင်က မိတ်ဆွေကောင်းပီသလို့လားလို့ ပြန်ပြီးတော့မေးရမယ်။
“မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိအောင်လို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက စပြီးတော့ စွမ်းဆောင်ပါ။ ကိုယ့်တစ်သက်အတွက် ကိုယ်ရဲ့ဘေးမှာ နေပြီးတော့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင် ပေးမယ့် မိတ်ဆွေတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် မရင်ဆိုင်နိုင်စရာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါက အရေးအကြီးဆုံးပဲ ။ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်နဲ့အတူ စိတ်တူ၊ သဘောတူနဲ့ လက်တွဲပေးမယ့် မိတ်ဆွေတွေရှိရင် အင်အားတွေက အလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ စိုးရိမ်စရာ၊ ကြောက်စရာတွေက နည်းသွားတယ်။ ကိုယ်တစ် ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်မက အများကြီးပါရင် ပိုပြီးတော့ အားရှိတယ်။ ကလေးတွေ သင်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်အောင် လည်း ကြိုးစားပါ။ မိတ်ဆွေ ကောင်းတွေ ရအောင်လို့လည်းကြိုးစားပါ။
“ကလေးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုလည်း တင်ပြလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်း တင်ပြပါလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ကျွန်မတို့ လုပ်ပေးပါမယ်။ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟာလည်း အများပြည်သူရဲ့ စေတနာအရ ရပ်တည်နေတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင် ဒေးရှင်းက လုပ်ပေးတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှ ဒီစခန်းအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေက လုပ်ပေးတယ်လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ ထားစေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်တိုင်း ပြည်လုံးရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီးတော့ ပံ့ပိုးထားတဲ့ ကျောင်းကလေးလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ ထားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်မယ့် သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အင်အားနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ သင်ယူစေချင်တယ်။
“နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မှာချင်တာကတော့ ဒီကလေးများဟာ ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့် ဇာတိကို ကိုယ်လာခဲ့တဲ့မြေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ပြီး တော့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကို မွေးမြူစေချင်တယ်။
“ဒါကြောင့် ကလေးတွေဟာ တစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာ ကိုယ့်ရပ်ရွာ၊ ကိုယ်မိဘ၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း ကိုယ်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဇာတိမြေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲပဲနှလုံးသွင်းပါ။ ဒီလိုကူညီခြင်းအားဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကူညီတာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာတစ်နေရာကို အေးချမ်းအောင် လုပ်ပေး တယ်ဆိုတာလည်းပဲ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတယ် ဆိုတာ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကလေးတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီကျောင်းမှာ ကောင်း ကောင်း မွန်မွန် ပညာ တွေသင်ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ မွေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန် ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တောင်တန်းဒေသကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အတွက် ငွေကျပ် ၈၆၆၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ခြုံစောင် ၁၀၆ ထည်၊ မျက်နှာ သုတ်ပုဝါ ၁၀၆ ထည်နှင့် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ် ၁၀၆ ဒါဇင်ကို ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ရာ ဂေဟာ တာဝန်ခံက လက်ခံရယူသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအား ပထမအဆင့် သတ်မှတ်၍ တည်ထောင်ခွင့်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလွှာနှင့် ငွေကျပ် ၄၈၆၀၀၀၀ ကို လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဦးသိန်းဆွေက ငွေကျပ် ၇ သိန်းတန်ဖိုးရှိ ကွန်ပျူ တာတစ်စုံနှင့် စာအုပ်စာတမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ခက်အောင်က ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသည့် ငွေကျပ် သိန်း ၂၀ ကို လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာသင်းလွင်က ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ လှူဒါန်းသော ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ငွေ ၁၄၃၂၀၀၀ နှင့် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ လှူဒါန်းသော ငွေကျပ် ၃ သိန်း တန်ဖိုးရှိ စာရေးကိရိယာများ နှင့် ကျောပိုးအိတ်များကို လည်းကောင်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။
ထို့နောက် ဆော့လော်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခေါ်မာဂူက နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ရိုးရာဝတ်စုံကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အိပ်ဆောင်များကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ဝင် များနှင့်အတူ စိန်ဂျိုးဇက် ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၌ ကျင်းပသည့် နေရပ်စွန့် ခွာပြည်သူများ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့ ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်များ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြ၍ အားပေးစကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ငွေကျပ် ၁၁၉၅၂၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနှင့် ပဲတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက အမျိုးသမီး ဦးဆောင် မိသားစုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ ၅နှစ်အောက်ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းများ နှင့် အသက် ၈၅ နှစ်အထက် အဘိုးအဘွားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၇၃၅၀၀၀၀ ကို လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်က ငွေကျပ် ၄ သိန်း တန်ဖိုးရှိ စာရေးကိရိယာများနှင့် ကျောပိုးအိတ်အလုံး ၃၀၀ ကိုလည်းကောင်း ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ကြသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ယာယီကယ်ဆယ် ရေးစခန်းအတွင်းရှိ ရက်ကန်းရုံတွင် ရိုးရာအ၀တ်အထည်များ ရက်လုပ်နေမှုကို လှည့် လည် ကြည့်ရှုပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လုံဂါပါစားသောက်ဆိုင်၌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တောင်တန်းဒေသ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက် ရေးဂေဟာမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများနှင့် နေ့လယ်စာကို အတူတကွသုံး ဆောင်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းရှိ မနောတိုင်များရှေ့တွင် စုပေါင်း၍ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသူများ၏ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးစခန်းသို့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လှူဒါန်းထားသည့် အဆောက်အဦ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာ၌ “ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို လာပြီး အားပေးတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒီအခမ်းအနားကို အလေး ထားရတဲ့ အကြောင်းက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲသွားတဲ့ ပြည်သူထဲက လူငယ်တွေရော၊ လူလတ်ပိုင်းတွေရော မူးယစ်ဆေးဝါးပြတ်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ဆိုတာ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီကိစ္စဆိုတာ လူမျိုးနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေး အယူအဆနဲ့လည်း မဆိုင်ပါဘူး။
“ကျွန်မတို့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းသွားတာ၊ ဘ၀တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ပြန်ပြီး ဖေးမပေးဖို့၊ ထူထောင်ပေးဖို့ ဆိုတာ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာ အားလုံးလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ စောစောက ကျွန်မပြောခဲ့သလို နိုင်ငံရေးအယူအဆနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး၊ လူမျိုးနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ လူသားချင်း စာနာတဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် တည်ငြိမ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ လုပ်ပေးနေရတာလို့ပဲ ပြောရပါ မယ်။
“မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မိမိတို့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ခါတစ်လေ အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ တော့ လူတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသွားပြီဆိုရင် ဒီလူရဲ့ မိသားစုတွေသာမကဘဲ ဒီလူရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း၊ နေတဲ့နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိခိုက်တတ်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို ကျွန်မတို့ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကူညီရမယ်၊ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဖေးမရမယ် ဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
“ကျွန်မတို့နိုင်ငံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ပြဿနာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ပြဿနာဆိုတာဟာ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှ အပြတ်ရှင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့လို ဖွံ့ဖြိုးပြီးစနိုင်ငံမှာဆို ပိုမိုပြီးတော့ အခက်အခဲတွေရှိမယ်လို့ တစ်ဖက်က ထင်ရပေမယ့် တစ်ဖက်က ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ မျှဝေချင်တဲ့စိတ် ထက်သန်ခြင်းကြောင့် ဒီကိစ္စတွေကို ကျွန်မတို့ ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ အားသာချက်က ပေးချင် ကမ်းချင်တဲ့စိတ်၊ ကုသိုလ်ပြုချင်တဲ့စိတ်ပါ၊ ကောင်းတဲ့ အမှုတွေကို ပြုချင်တဲ့စိတ်၊ လှူဒါန်းချင်တဲ့စိတ်ပါ။ လှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ငွေရေးကြေးရေးအရ လှူဒါန်းတာတို့၊ ပစ္စည်းလှူတာတို့၊ အဲဒီဟာတွေထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတာက ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းအား၊ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်၊ ကိုယ့်ရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာတွေကို ရင်းနှီးပြီးတော့ လုပ်ပေး တာဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။
“မူးယစ်ဆေးဝါး ပြတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ စွဲနေတဲ့သူတွေ ဖြတ်လိုက်တယ်။ ဖြတ်ပြီးတော့ အရေးကြီးတာက ဆက်ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးပြတ်နေဖို့ပါ။ ပြတ်နေတဲ့ အချိန်ကို ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ပဲ၊ အဲဒါက ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လုံးဝ ပြတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ လူဆိုတာ တစ်ချိန် တစ်ချိန်မှာ အားကိုးချင်တဲ့ စိတ်လေး တွေရှိလာတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို အားကိုးချင်တယ်၊ တစ်ခုခုကို မှီဝဲချင်တယ်၊ အဲဒီလိုဆိုရင် မူးယစ်ဆေးဝါးအစား ရပ်ရွာက မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အင်အားတွေက အစား ထိုးပေးရမယ်၊ ဒီမိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အင်အားတွေကို အားကိုးအောင်လို့၊ ယုံကြည် အောင်လို့၊ မှီခိုအောင်လို့ လုပ်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကို အခြေခံတဲ့၊ အခြေပြုတဲ့ အားကိုးတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်ပေးသူများ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးစခန်းကြီးကို ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းမှာဆိုရင် ပြည်သူတွေအားလုံး ပါဝင် နိုင်တဲ့ စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဘက်စုံပြုလုပ်ပြီးတော့ ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အရေးကြီး တာက ဒီစခန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် စခန်းကိုလာတဲ့ မူးယစ်ဆေး ဖြတ်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်များ ဟာ တကယ်ပဲပြတ်သွားပြီလား။ ပြတ်သွားပြီး မိမိတို့ရဲ့ ရပ်ရွာ၊ နေထိုင်ရာ ဒေသတွေ သာမက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး၊ လူသားအားလုံးကို အကျိုးပြု နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
“ လေ့လာမှုစစ်တမ်းတွေအရ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေပါ မူးယစ်ဆေးကို စမ်းသပ်သုံးစွဲကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မသိသလောက် အများစုက စာမေးပွဲ အတွက် စာကျက်ဖို့ ဒီဟာလေးသုံးလိုက်ရင် အိပ်မငိုက်ဘူး၊ ဘာမှလည်း မဖြစ်နိုင် ဘူး ဆိုပြီး ဆေးအဖြစ် သုံးရင်းနဲ့ တစ်လုံးကနေ နှစ်လုံး၊ နှစ်လုံးကနေ ခြောက်လုံး စသဖြင့် များများလာပြီး ဆေးစွဲတဲ့အထိကို ရောက်သွားပါတယ်။
“တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုစခန်းမှာလာပြီး မိဘတွေကို ပညာပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေက ဆေးတွေသုံးစွဲနေတယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံတွေ ပြောင်းလဲနေလဲ ဆိုတာ ကို အမြဲမပြတ် သတိထား စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို မူးယစ်ဆေးဝါး ပြန်လည် ထူထောင်ရေးစခန်းဖွင့်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင် ဒေးရှင်းက လည်း လှူတာဆိုပေမယ့် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းကို လှူနိုင်အောင် ထောက်ပံ့တာ ကတော့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံက ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်နိုင်ငံဆိုတာဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ်မှာ မိတ်ဆွေအဖြစ် ဆက်ဆံခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အခက်အခဲ တွေကို အမြဲတမ်း နားလည်စွာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက် ကူညီပေးတဲ့အထဲမှာ ချက်နိုင်ငံပါပါတယ်။ ချက်နိုင်ငံဟာ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းက တခြားနေရာတွေမှာ ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်အနေ နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်သူများစခန်းတွေ အတွက်လည်း လှူဒါန်းဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိပြီး ပါပြီ။ လူငယ်၊ လူလတ်တွေရဲ့ဘ၀တွေ ပြန်လည် ထူထောင် ရေးအတွက် စေတနာ အပြည့်အ၀နဲ့ ကူညီတဲ့ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံရဲ့ သံအမတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်အောင်မြင် ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူ လူထုက တက်တက် ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိရင် ဘယ်လုပ်ငန်းမှ မအောင်မြင်နိုင် ပါဘူး။ ဘယ်အစိုးရ ကမှ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ပံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဘဲ အတော်ဆုံးလူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရဖြစ်စေပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ပံ့မှု၊ ကူညီ ၀ိုင်းဝန်းမှုနဲ့သာ အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြန်လည် ထူထောင်ရေးစခန်း ဆိုတာကလည်း မြစ်ကြီးနားပြည်သူလူထုရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီထောက် ခံမှုတွေနဲ့သာ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်ပေးသူများကို အကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမိုးဇော်ဦးက အဆောက်အဦးဆောက်လုပ် လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ပြန် လည် ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းထံ အဆောက်အဦးနှင့် ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Jaroslav Dolecek ထံ ကျေးဇူးတင်လွှာပေးအပ်သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး မူးယစ်သံသရာမလည်စေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် စခန်း အခြေပြု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်ကုန်း ရပ်ကွက် အင်ဂျန်ဒုံနှစ်ခြင်းအသင်းတော် နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများ ယာယီ ကယ် ဆယ်ရေး စခန်း၌ ကျင်းပသည့် ထောက်ပံ့ငွေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အင်ဂျန်ဒုံနှစ်ခြင်းအသင်းတော် ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အားပေးစကားပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များထံ ငွေကျပ် ၃၈၇၇၇၅၀ တန်ဖိုးရှိ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားနှင့် ပဲတို့ကို ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်က ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မိသားစုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ ၅နှစ်အောက်ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းများ နှင့် အသက် ၈၅ နှစ်အထက် အဘိုးအဘွားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၁၈၅၀၀၀၀ ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်က စာရေးကိရိယာများနှင့် ကျောပိုးအိတ်များကို လည်းကောင်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ကြရာ စခန်းတာဝန်ခံနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးများက လက်ခံရယူကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် စခန်းအတွင်းရှိ လူနေဆောင် များနှင့် ဈေးဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေမှု အခြေအနေများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြ သည်။
ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ရောက်ရှိစဉ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် က အားပေးစကားပြောကြားရာ၌ “အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အားလုံးက ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာ ပြန်ပြီးတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစခန်းတွေ ကို ထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ ပံ့ပိုးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရော အစိုးရအပါ အ၀င် အဓိက တာဝန်တစ်ခုကတော့ ဒီစခန်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ တစ်ချိန် တစ်ခါ ကြရင် မိမိတို့ရဲ့နေရပ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး၊ ချမ်းချမ်းသာသာ တိုးတက်စွာ နေသွားနိုင် ဖို့ပြင်ဆင်ပေး ဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလိုစခန်းတွေကိုလာတယ်ဆိုတာ တခဏပဲ လို့ စိတ်ထဲမှာ ထားစေချင်တယ်။ တစ်ချိန်တစ်ခါမှာ တို့ရပ်ရွာတွေကို ပြန်လည်ပြီး တော့ ထူထောင်မယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ၀ိုင်းလုပ်မယ်၊ အဲဒီလိုစိတ်တွေကို မွေးဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။
“ဒီလိုစခန်းတွေမှာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးအလေးထားပါတယ်။ ပညာ ရေးဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားအတွက်၊ ကျန်းမာရေးဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားအတွက် ဘယ်သူမဆို လူသားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော အင်အားပြည့်ဖို့က အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။
“စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အလေးအနက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်စေချင် တယ်။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကို အစိုးရအဖွဲ့ကို တောင်းစေချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကပါ။ နောက်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပညာရေးဘက်နဲ့ နည်းနည်း ဆက်စပ် နေတာကတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပါ။ ကလေးများကို ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှုဘက်မှာ အားပေးစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေပြီး အားပေးစေချင်ပါတယ်။
“အားကစားဘက်တင်မကဘဲ အနုပညာ ဂီတဘက်ကိုလည်း အားပေးစေချင်ပါ တယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာဖို့လည်းလိုတယ်။ အနုပညာစိတ်ဓာတ် တွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးအောင်လို့ အခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ စုပေါင်းပြီး သီချင်းဆိုတာတို့ စုပေါင်းပြီးတီးဝိုင်းတီး တာ၊ စုပေါင်းပြီးတော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်တာတို့ဟာ အချင်း ချင်းကိုလည်း ပိုပြီးသွေးစည်းစေတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းပေးပါတယ်။ ဒါအတွက် လည်း အလေးထားပြီး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ ဒီမှာလာပြီးတော့ အားပေးစကားပြောတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မရဲ့ စိတ် ထဲမှာရှိတာတွေ မျှဝေခဲ့တယ်လို့ ဒီလိုပဲ ခံစားပါတယ်။ ဒီလိုစခန်းတွေလာတဲ့အခါကျမှ ကိုယ်ရပ်ကိုယ့်ရွာစွန့်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းလာရတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်ထဲမှာ ခံစားမှု တွေရှိသလဲ။ ဒီခံစားမှုတွေပျောက်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဟာ ဘယ်လို လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ အဲဒါတွေကို မျှဝေတာပါ။ မျှဝေခြင်းအားဖြင့် ဒီပြဿနာ တွေကိုပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းတွေကို တွေ့လာ ကြမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အမြဲပဲ ၀န်ကြီးဌာနတွေရော၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ တွေရော ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိတွေ့မှု အမြဲရှိရမယ်ဆိုတာ အားပေးပါတယ်။ အများစု အတွက် သာယာမယ့်၊ လုံခြုံမယ့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့၊ ပြုစုပျိုး ထောင်ဖို့ တို့ကို ဦးတည်တာပါ။
“ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ဒီလိုနေရပ်စွန့်ခွာသွားတဲ့ ပြည်သူပြည်သားများ ဒီလိုစခန်းမှာ နေနေရတာကို လုံးဝမနှစ်မြို့ပါဘူး။ အမြန်ဆုံးကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရပ်ရွာမှာ အေးအေး ချမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စွာ နေနိုင်ဖို့အတွက်ပဲ လိုလားပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်း ကာယကံရှင်များ ကိုယ်တိုင် က ၀ိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
“ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း အင်မတန်မှ အဓိကကျပါတယ်။ စခန်းတွေမှာ ပြဿနာတွေရှိရင် ပြည်နယ်အစိုးရက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ ပြဿနာရှိတာကို ဖုံးထားလို့လည်း ပြဿနာက ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မကျေနပ်မှုတွေကို ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ ဖုံးထားလို့လည်း ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိုအပ်ချက်တွေရှိရင် ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပေးပါ။ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ဒီဟာတွေကို ဖြေရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။
“ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာ နောင်ကိုယ့်ဘ၀အတွက် နောင်ကိုယ့် ရပ်ကိုယ့်ရွာကို ပြန်သွားရင် ကိုယ့်ရွာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်နိုင်တဲ့အား တွေကို ဒီမှာယူပါ။ လုပ်နိုင်မယ့်အရည်အချင်းတွေကို ဒီမှာရအောင် လုပ်ပါ။ ကလေး တွေကိုလည်း ဒီဟာအတွက်ကို အားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကလေးတွေပါပဲ။ လူငယ်တွေ၊ ကလေးတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့စံနှုန်းထားတွေရှိမှ၊ ကိုယ်ရပ် ကိုယ့်ရွာကို ကူညီချင်တဲ့စိတ်တွေရှိမှ ရေရှည်မှာအေးချမ်းမယ်။ ရေရှည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအင်မတန်မှ မွတ်သိပ် နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ် ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အင်မတန်မှ လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကအာဟာရက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကို စခန်းတွေမှာ သင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ စခန်းတွေကို အခြေခံပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားများကြားမှာ ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်တွေပွားများ လာအောင်လို့ အင်မတန်မှလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။
“အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ခွဲပြီးတော့ ဆက်ဆံလို့မရပါ ဘူး။ ကျောသားရင်သားမခွဲရဘူးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပါ။ ကျွန်မတို့ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တရားဥပဒေအရ၊ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒအရ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကြားမှာ ခွဲခြားပြီးတော့မဆက်ဆံရဘူး။ အားလုံးကို တန်းတူညီ တူဆက်ဆံရမယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတစ်ဦးချင်း တစ်ဦးချင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပါ တယ်။ ပြည်သူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးတွေ စုပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးဖြစ် လာမှာပါ။
“ဒီစခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်း သာသာနဲ့ နေနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့လည်း ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ပြည်သူ ပြည်သားတွေအနေနဲ့လည်း ပြည်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့ အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်နေပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ဟု ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့သည် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ထွက်ခွာလာရာ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ယနတှေ့ငျ ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့ရှိ တောငျတနျးဒသေ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးဂဟော၊ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးက လှူဒါနျးထားသညျ့ မူးယဈ ဆေးဖွတျပွီးသူမြား ပွနျလညျထူထောငျရေးစခနျးနှငျ့ ကယျဆယျရေးစခနျးမြားသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုပွီး လိုအပျသညျမြား ထောကျပံ့ပေးအပျသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးရဲအောငျ၊ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ၊ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေး၊ သမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးမငျးသူတို့ နှငျ့ အတူ ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ အထူးလယောဉျဖွငျ့ ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့သို့ ရောကျရှိ ကွသညျ။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့အဖှဲ့အား ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာခကျအောငျ၊ ပွညျနယျ လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ဦးထှနျးတငျ၊ ပွညျနယျတရား လှတျတျော တရားသူကွီးခြုပျ ဦးတူးဂြာ၊ ပွညျနယျဝနျကွီးမြား၊ တိုငျးရငျးသားစာပနှေငျ့ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား၊ တာဝနျရှိသူမြားက မွဈကွီးနားလဆေိပျ၌ျ ကွိုဆိုနှုတျ ဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ မွဈကွီးနားမွို့ရှိ ရှမေိုးတောငျစတေီတျောသို့ သှားရောကျ၍ ပနျး၊ ရခေမျြးနှငျ့ ဆီမီးတို့ ကပျလှူပူဇျောပွီး ဖူးမွျောကွညျညိုကာ စတေီတျောဧညျ့သညျတျော မှတျတမျးစာအုပျတှငျ လကျမှတျရေးထိုးသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ စတေီတျောပရိဝုဏျအတှငျးရှိ ဓမ်မာရုံ၌ ပွညျနယျသံဃနာယကအဖှဲ့ဝငျ ဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တခမေိန်ဒနှငျ့ ပွညျနယျသံဃ နာယကအဖှဲ့ အကြိုးတျောဆောငျ အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိ ဘဒ်ဒန်တ ကတေုမာလာတို့ အမှူးပွု သညျ့ ဆရာတျောမြားအား ဖူးမွျောကွညျညိုပွီး လှူဖှယျဝတ်ထုပစ်စညျးမြား ဆကျကပျ လှူဒါနျးသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျ မြားသညျ မွဈကွီးနားမွို့ ရှစေကျရပျကှကျရှိ တောငျတနျးဒသေ ကြောငျးသား ကြောငျးသူ မြား ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးဂဟော(လနျဆယျ)၌ ကငျြးပသညျ့ တောငျတနျးဒသေ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးဂဟောသို့ ထောကျပံ့ငှနှေငျ့ ထောကျပံ့ပစ်စညျးမြား ပေးအပျပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျကွသညျ။
အခမျးအနားတှငျ ကြောငျးသားကြောငျးသူလေးမြားက “သူရဲကောငျး” နှငျ့ “ငွိမျးခမျြးခွငျးကို တညျဆောကျစို့” သီခငျြးမြားဖွငျ့ သီဆိုဧညျ့ခံ ဖြျောဖွကွေသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ဩဝါဒ စကားပွောကွားရာတှငျ “ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ သီခငျြးဆိုပေးတဲ့ ကလေးတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးတငျတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ သီခငျြးတှဆေိုတဲ့အခါမှာ ဘာကိုသတိထားမိ သလဲ ဆိုတော့ တိုငျးပွညျအတှကျ သူရဲကောငျးတှေ။ တိုငျးပွညျအတှကျ သူရဲကောငျး ဆိုတာ လူတိုငျးလူတိုငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ အခုဒီမှာထိုငျနတေဲ့ ကလေးတှေ တဈယောကျ ခငျြး၊ တဈယောကျခငျြးဟာလညျး တိုငျးပွညျအတှကျ သူရဲကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ တိုငျးပွညျအတှကျ သူရဲကောငျးဖွဈတယျ ဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကို တိုငျးပွညျအတှကျ တနျဖိုးရှိရှိနဲ့ သုံးတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အခုဒီစခနျးမှာဆိုရငျ ကလေးတှကေို ကိုယျ့ဘဝကိုယျတိုငျးပွညျအတှကျ၊ အခွားပွညျသူ ပွညျသားတှအေတှကျ၊ ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသားတှအေတှကျ ဘယျလိုတနျဖိုးရှိအောငျ သုံးရမလဲ ဆိုတာတှကေို သငျပေး နတေယျလို့ ကြှနျမတို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ ကိုယျ့ တနျဖိုးနဲ့ ကိုယျ ရှိပါတယျ။ အဲဒီတနျဖိုးကို နားလညျဖို့လိုတယျ။ သိရှိဖို့လိုတယျ။ လေးစားဖို့ လိုပါ တယျ။ ဘယျသူမှ ငါဟာတနျဖိုးမရှိဘူးဆိုတာ ထငျစရာအကွောငျး မရှိပါဘူး။ လူဖွဈ လာရငျ တနျဖိုးရှိလာပွီပဲ။ အဲဒီတနျဖိုးကို ကောငျးကောငျး၊ မှနျမှနျကနျကနျ သုံးသလား၊ မသုံးဘူးလား ဆိုတာက အရေးကွီးတာဖွဈပါတယျ။
“သီခငျြးတှနေဲ့ ဖြျောဖွတေယျဆိုပမေယျ့ သီခငျြးတှဟော ဖြျောဖွမှေု သကျသကျ မဟုတျဘူး။ အဓိပ်ပာယျလညျးရှိတယျ။ နိုငျငံ့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ တနျဖိုးတှကေိုလညျး ဖျောထုတျပေးနတေဲ့ သီခငျြးတှဖွေဈတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ အမြားကွီးအားတကျ ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးတှဟော ဒီသီခငျြးတှဆေိုတဲ့အခါကွရငျ အဓိပ်ပာယျတှကေို နှလုံးသှငျး ပွီးတော့ လေးလေးနကျနကျ ထားလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ကိုယျဆို နတေဲ့ သီခငျြး ဟာ ဘယျလိုအဓိပ်ပာယျရှိသလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ။ အဓိပ်ပာယျကို အဓိက မထားဘဲနဲ့ တေးသှားတှကေိုပဲ အဓိကထားမယျဆိုရငျ မလုံလောကျပါဘူး။
“အဓိပ်ပာယျတှကေို အလေးထားဖို့ မမစေ့ခေငျြပါဘူး။ ကလေးမြားဟာ ဒီလို သီခငျြး တှေ သငျတယျဆိုရငျ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေလညျး သသေခြောခြာ အဓိပ်ပာယျ ကို ရှငျးပွလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။ ဒီကလေးတှအေနနေဲ့ ဒီအဓိပ်ပာယျတှကေို ဘယျလိုနားလညျ လညျး ဆိုတာလညျး ပွနျပွီးတော့ မေးစခေငျြပါတယျ။
“ဒီသငျတနျးက ကလေးတှကေ တဈခြိနျလုံး တိုးတကျနတေယျဆိုတာလညျးပဲ ကွားရပါတယျ။ ဒါဟာ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့ စှမျးဆောငျမှု၊ ကွိုးစားမှုကွောငျ့လညျး ပါတယျ။ ကလေးတှကေိုယျတိုငျရဲ့ စှမျးဆောငျမှု၊ ကွိုးစားမှုကွောငျ့လညျးပါတယျ။ ဒီအခနျးထဲမှာ ရှိနတေဲ့ကလေးတှဟော ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြအတှကျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ တနျဖိုး ရှိတဲ့ လူကွီးတှဖွေဈလာအောငျ တခြိနျလုံးကွိုးစားနပေါစလေို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။ တခြိနျလုံး ကွိုးစားမှဖွဈမှာပါ။ ကွိုးစားတယျဆိုတာ ဘယျတော့မှ အဆုံးမရှိဘူး။ ကွိုးစားတယျဆိုတာ အဆုံးမရှိလို့ ပငျပနျးပါတယျလို့လညျး မထငျပါနဲ့။ မကွိုးစားဘဲနဲ့ ဒီလိုပဲ နရေတဲ့ဘဝဆို တာလညျး အနှဈသာရမရှိပါဘူး။
“ဒီနေ့ ဒီအခြိနျအခါမှာ ဆိုပေးတဲ့ သီခငျြးလေးနှဈပုဒျရဲ့ အဓိပ်ပာယျတှကေို တကယျပဲ နားလညျအောငျလုပျပွီးတော့ ဒီအဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ ကိုကျညီစှာ နသှေားမယျ ဆိုရငျ ဒီအခနျး ထဲက ကလေးတှဟော ဘဝမှာ တိုးတကျဖို့ပဲရှိပါတယျ။ ကိုယျ့တဈ ယောကျထဲ အတှကျ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြအတှကျ၊ ကိုယျ့နိုငျငံအတှကျ၊ ကိုယျ့ကမ်ဘာကွီးအတှကျ၊ ငွိမျးခမျြးသောကမ်ဘာသဈပါ။ ကမ်ဘာသဈဆိုတာ ကိုယျ့နိုငျငံ တဈနိုငျငံထဲ ငွိမျးခမျြးလို့လညျး မလုံလောကျဘူး။ တဈကမ်ဘာလုံးငွိမျးခမျြးမှ အားလုံး ငွိမျးခမျြးမှာ။ တဈကမ်ဘာလုံးငွိမျးခမျြးတဲ့ အခွအေနဆေိုတာ တဈခါမှ ဒီကမ်ဘာကွီးရဲ့ သမိုငျးမှာ မဖွဈခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒါက ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လူတှကေ ငွိမျးခမျြး ခငျြတဲ့ ဘကျကို သိပျမသှားလို့ပဲ။
“ဒီကလေးတှရေဲ့ ခတျေမှာကွတော့ ပိုပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးရေး ရနိုငျမလားဆိုတာ ကလေး တဈယောကျခငျြး၊ တဈယောကျခငျြးပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ငါတဈယောကျ တညျး ဘာလုပျလို့ရမှာလညျးဆိုတာ မှနျပါတယျ။ ကိုယျတဈယောကျတညျး လုပျရတာ ခကျပမေယျ့၊ ကိုယျ့နဲ့တှဲပွီးတော့ လုပျနိုငျတဲ့အဖျောတှေ၊ မိတျဆှကေောငျးတှေ ရှာပွီးတော့ လုပျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့လုပျခငျြတဲ့အလုပျတှဟော အောငျမွငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးတှဟော ဒီလိုအရှယျမှာ မိတျဆှကေောငျးတှရေအောငျလုပျဖို့လညျး ဒါကို တာဝနျတဈခုလို့ စဉျးစားစခေငျြပါတယျ။ မိတျဆှကေောငျးမရှိဘူးဆိုရငျ ကိုယျကိုယျ တိုငျက မိတျဆှကေောငျးပီသလို့လားလို့ ပွနျပွီးတော့မေးရမယျ။
“မိတျဆှကေောငျးတှရှေိအောငျလို့ ငယျငယျကတညျးက စပွီးတော့ စှမျးဆောငျပါ။ ကိုယျ့တဈသကျအတှကျ ကိုယျရဲ့ဘေးမှာ နပွေီးတော့ အခကျအခဲတှကေို ရငျဆိုငျ ပေးမယျ့ မိတျဆှတှေေ ရှိတယျဆိုရငျ မရငျဆိုငျနိုငျစရာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါက အရေးအကွီးဆုံးပဲ ။ အခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားတဲ့နရောမှာ ကိုယျနဲ့အတူ စိတျတူ၊ သဘောတူနဲ့ လကျတှဲပေးမယျ့ မိတျဆှတှေရှေိရငျ အငျအားတှကေ အလိုလို ဖွဈလာတယျ။ စိုးရိမျစရာ၊ ကွောကျစရာတှကေ နညျးသှားတယျ။ ကိုယျတဈ ယောကျတညျး ရငျဆိုငျရတာမဟုတျဘူး။ တဈယောကျမက အမြားကွီးပါရငျ ပိုပွီးတော့ အားရှိတယျ။ ကလေးတှေ သငျယူနတေဲ့ အခြိနျမှာဆိုရငျ မိတျဆှကေောငျး ဖွဈအောငျ လညျး ကွိုးစားပါ။ မိတျဆှေ ကောငျးတှေ ရအောငျလို့လညျးကွိုးစားပါ။
“ကလေးတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှေ ရှိတယျဆိုရငျ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေလညျး သကျဆိုငျရာလူကွီးတှကေိုလညျး တငျပွလိမျ့မယျ။ နောကျပွီးတော့ အထူးသဖွငျ့ ကြှနျမတို့ ဖောငျဒေးရှငျးကိုလညျး တငျပွပါလို့ ကြှနျမအနနေဲ့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ တတျနိုငျသမြှ ကြှနျမတို့ လုပျပေးပါမယျ။ ဒီဖောငျဒေးရှငျးဟာလညျး အမြားပွညျသူရဲ့ စတေနာအရ ရပျတညျနတေဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒျေါခငျကွညျဖောငျ ဒေးရှငျးက လုပျပေးတဲ့ ကိစ်စမှနျသမြှ ဒီစခနျးအတှကျလုပျပေးတဲ့ ကိစ်စမှနျသမြှကို တဈတိုငျးပွညျလုံးရဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှကေ လုပျပေးတယျလို့ပဲ စိတျထဲမှာ ထားစခေငျြပါတယျ။ ဒီတဈတိုငျး ပွညျလုံးရဲ့ စတေနာတှနေဲ့ ဝိုငျးပွီးတော့ ပံ့ပိုးထားတဲ့ ကြောငျးကလေးလို့ပဲ စိတျထဲမှာ ထားစခေငျြပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဂရုစိုကျမယျ့ သူတှေ အမြားကွီးရှိတယျဆိုတဲ့ အငျအားနဲ့ ဆကျလကျပွီးတော့ သငျယူစခေငျြတယျ။
“နောကျဆုံးအနနေဲ့ မှာခငျြတာကတော့ ဒီကလေးမြားဟာ ကိုယျ့ရပျ ကိုယျ့ရှာ ကိုယျ့ ဇာတိကို ကိုယျလာခဲ့တဲ့မွအေတှကျ တတျနိုငျတဲ့အခြိနျမှာ တတျနျိုငျသမြှ ပွနျပွီး တော့ လုပျပေးမယျဆိုပွီးတဲ့ စိတျဓာတျကလေးတှကေို မှေးမွူစခေငျြတယျ။
“ဒါကွောငျ့ ကလေးတှဟော တဈနတေ့ဈခြိနျတဈခါမှာ ကိုယျ့ရပျရှာ၊ ကိုယျမိဘ၊ ကိုယျ့ဆှမြေိုးသားခငျြး ကိုယျပေါကျဖှားလာတဲ့ ဇာတိမွကေို ဘယျလိုပုံစံနဲ့ပွနျပွီးတော့ ကူညီနိုငျမလဲဆိုတာကို အမွဲပဲနှလုံးသှငျးပါ။ ဒီလိုကူညီခွငျးအားဖွငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးကို ကူညီတာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ နရောတဈနရောကို အေးခမျြးအောငျ လုပျပေး တယျဆိုတာလညျးပဲ ကမ်ဘာတဈခုလုံးရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုတယျ ဆိုတာ အဲဒီလို စိတျဓာတျနဲ့ ကလေးတှေ ဆကျလကျပွီးတော့ ဒီကြောငျးမှာ ကောငျး ကောငျး မှနျမှနျ ပညာ တှသေငျပွီးတော့ ကောငျးတဲ့စိတျဓာတျတှေ မှေးနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျ ကောငျး တောငျးလိုကျပါတယျ ” ဟု ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက တောငျတနျးဒသေကြောငျးသား ကြောငျးသူမြား အတှကျ ငှကေပျြ ၈၆၆၀၀၀ တနျဖိုးရှိ ခွုံစောငျ ၁၀၆ ထညျ၊ မကျြနှာ သုတျပုဝါ ၁၀၆ ထညျနှငျ့ ကြောငျးသုံးဗလာစာအုပျ ၁၀၆ ဒါဇငျကို ထောကျပံ့ ပေးအပျရာ ဂဟော တာဝနျခံက လကျခံရယူသညျ။
ဆကျလကျ၍ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက တောငျတနျးဒသေ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးဂဟောအား ပထမအဆငျ့ သတျမှတျ၍ တညျထောငျခှငျ့ပွုကွောငျး အသိအမှတျပွုလှာနှငျ့ ငှကေပျြ ၄၈၆၀၀၀၀ ကို လညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးက ဦးသိနျးဆှကေ ငှကေပျြ ၇ သိနျးတနျဖိုးရှိ ကှနျပြူ တာတဈစုံနှငျ့ စာအုပျစာတမျးမြားကိုလညျးကောငျး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ ခကျအောငျက ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ လှူဒါနျးသညျ့ ငှကေပျြ သိနျး ၂၀ ကို လညျးကောငျး၊ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာသငျးလှငျက ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှုဦးစီးဌာနမှ လှူဒါနျးသော ပညာသငျစရိတျထောကျပံ့ငှေ ၁၄၃၂၀၀၀ နှငျ့ ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံးမှ လှူဒါနျးသော ငှကေပျြ ၃ သိနျး တနျဖိုးရှိ စာရေးကိရိယာမြား နှငျ့ ကြောပိုးအိတျမြားကို လညျးကောငျး ထောကျပံ့ပေးအပျကွရာ တာဝနျရှိသူမြားက လကျခံရယူကွသညျ။
ထို့နောကျ ဆော့လျောမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါချေါမာဂူက နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျထံ ရိုးရာဝတျစုံကို လကျဆောငျအဖွဈပေးအပျပွီး ကြေးဇူးတငျစကား ပွောကွားကာ အခမျးအနားကို ရုပျသိမျးလိုကျသညျ။
အခမျးအနားအပွီးတှငျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ကြောငျးသား ကြောငျးသူမြား၏ အိပျဆောငျမြားကို လှညျ့လညျကွညျ့ရှုပွီး လိုအပျသညျမြားကို လမျးညှနျ မှာကွားသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ အဖှဲ့ဝငျ မြားနှငျ့အတူ စိနျဂြိုးဇကျ ယာယီကယျဆယျရေးစခနျး၌ ကငျြးပသညျ့ နရေပျစှနျ့ ခှာပွညျသူမြား ယာယီကယျဆယျရေးစခနျးသို့ ထောကျပံ့ငှနှေငျ့ ထောကျပံ့ပစ်စညျမြား ပေးအပျပှဲ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျကွ၍ အားပေးစကားပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ငှကေပျြ ၁၁၉၅၂၀၀၀ တနျဖိုးရှိ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆားနှငျ့ ပဲတို့ကို ထောကျပံ့ပေးအပျရာ ကယျဆယျရေးစခနျးမှ ကိုယျစား လှယျတဈဦးက လကျခံရယူသညျ။
ဆကျလကျ၍ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက အမြိုးသမီး ဦးဆောငျ မိသားစုမြား၊ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား၊ ၅နှဈအောကျကလေးမြား၊ မသနျစှမျးမြား နှငျ့ အသကျ ၈၅ နှဈအထကျ အဘိုးအဘှားမြားအတှကျ ထောကျပံ့ငှေ ကပျြ ၇၃၅၀၀၀၀ ကို လညျးကောငျး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာခကျအောငျက ငှကေပျြ ၄ သိနျး တနျဖိုးရှိ စာရေးကိရိယာမြားနှငျ့ ကြောပိုးအိတျအလုံး ၃၀၀ ကိုလညျးကောငျး ထောကျပံ့ ပေးအပျကွသညျ။
အခမျးအနားအပွီးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ ယာယီကယျဆယျ ရေးစခနျးအတှငျးရှိ ရကျကနျးရုံတှငျ ရိုးရာအဝတျအထညျမြား ရကျလုပျနမှေုကို လှညျ့ လညျ ကွညျ့ရှုပွီး ဒသေခံပွညျသူမြားနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးတှဆေုံ့ နှုတျဆကျစကား ပွောကွားသညျ။
မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ လုံဂါပါစားသောကျဆိုငျ၌ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ တောငျတနျးဒသေ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား ပွုစုစောငျ့ရှောကျ ရေးဂဟောမှ ကြောငျးသားကြောငျးသူလေးမြားနှငျ့ နလေ့ယျစာကို အတူတကှသုံး ဆောငျပွီး မွဈကွီးနားမွို့ မနောကှငျးရှိ မနောတိုငျမြားရှတှေ့ငျ စုပေါငျး၍ မှတျတမျးတငျ ဓာတျပုံရိုကျသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ လယျကုနျးရပျကှကျရှိ မူးယဈဆေးဖွတျပွီးသူမြား၏ ပွနျလညျထူ ထောငျရေးစခနျးသို့ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးမှ လှူဒါနျးထားသညျ့ အဆောကျအဦ လှဲပွောငျးပေးအပျပှဲ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျသညျ။
အခမျးအနားတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက နှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားရာ၌ “ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို လာပွီး အားပေးတဲ့ ပွညျသူတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကြှနျမတို့က ဒီအခမျးအနားကို အလေး ထားရတဲ့ အကွောငျးက ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မူးယဈဆေးဝါး စှဲသှားတဲ့ ပွညျသူထဲက လူငယျတှရေော၊ လူလတျပိုငျးတှရေော မူးယဈဆေးဝါးပွတျပွီး ပွနျလညျထူထောငျဖို့ ဆိုတာ အားလုံးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ကိစ်စပါ။ ဒီကိစ်စဆိုတာ လူမြိုးနဲ့လညျး မဆိုငျဘူး၊ ကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာနဲ့လညျး မဆိုငျဘူး၊ နိုငျငံရေး အယူအဆနဲ့လညျး မဆိုငျပါဘူး။
“ကြှနျမတို့ အားလုံးဝိုငျးဝနျးပွီးတော့ လုပျပေးရမယျ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ ကြှနျမတို့ရဲ့ နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှေ၊ ပွညျသူပွညျသားတှဟော မူးယဈဆေးဝါးကွောငျ့ စှမျးရညျတှေ ကဆြငျးသှားတာ၊ ဘ၀တှေ ပကျြစီးသှားတဲ့အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့အခါ ပွနျပွီး ဖေးမပေးဖို့၊ ထူထောငျပေးဖို့ ဆိုတာ ကြှနျမတို့ တဈယောကျခငျြး၊ တဈယောကျခငျြးမှာ တာဝနျရှိပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတဲ့ကိစ်စမှာ အားလုံးလညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလို့ရပါတယျ။ စောစောက ကြှနျမပွောခဲ့သလို နိုငျငံရေးအယူအဆနဲ့လညျး မဆိုငျဘူး၊ ကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာနဲ့လညျး မဆိုငျဘူး၊ လူမြိုးနဲ့လညျး မဆိုငျဘူး။ လူသားခငျြး စာနာတဲ့စိတျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြ တညျငွိမျဖို့အတှကျ ကြှနျမတို့ လုပျပေးနရေတာလို့ပဲ ပွောရပါ မယျ။
“မူးယဈဆေးဝါးရဲ့ ဆိုးကြိုးတှကွေောငျ့ ဘဝပကျြသှားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှဟော မိမိတို့ ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို တဈခါတဈလေ အနှောငျ့အယှကျပေးတတျပါတယျ။ အဲဒီ တော့ လူတဈယောကျ မူးယဈဆေးဝါးစှဲသှားပွီဆိုရငျ ဒီလူရဲ့ မိသားစုတှသောမကဘဲ ဒီလူရဲ့ အသိုငျးအဝိုငျး၊ နတေဲ့နရော၊ ပတျဝနျးကငျြကိုပါ ထိခိုကျတတျတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို ကြှနျမတို့ ဝိုငျးဝနျးပွီးတော့ ကူညီရမယျ၊ ဝိုငျးဝနျးပွီးတော့ ဖေးမရမယျ ဆိုပွီးတော့ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ။
“ကြှနျမတို့နိုငျငံတငျမဟုတျပါဘူး။ တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ ပွဿနာပါ။ တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ ပွဿနာဆိုတာဟာ ဒီမူးယဈဆေးဝါးနဲ့ ပတျသကျလို့ရှိရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခမျြးသာဆုံး နိုငျငံကွီးတှတေောငျမှ အပွတျရှငျးလို့ မရသေးပါဘူး။ ကြှနျမတို့လို ဖှံ့ဖွိုးပွီးစနိုငျငံမှာဆို ပိုမိုပွီးတော့ အခကျအခဲတှရှေိမယျလို့ တဈဖကျက ထငျရပမေယျ့ တဈဖကျက ကြှနျမတို့ ပွညျသူပွညျသားတှရေဲ့ မြှဝခေငျြတဲ့စိတျ ထကျသနျခွငျးကွောငျ့ ဒီကိစ်စတှကေို ကြှနျမတို့ ကိုငျတှယျတဲ့နရောမှာ အားသာခကျြတှရှေိပါတယျ။ အားသာခကျြက ပေးခငျြ ကမျးခငျြတဲ့စိတျ၊ ကုသိုလျပွုခငျြတဲ့စိတျပါ၊ ကောငျးတဲ့ အမှုတှကေို ပွုခငျြတဲ့စိတျ၊ လှူဒါနျးခငျြတဲ့စိတျပါ။ လှူဒါနျးခငျြတယျဆိုတာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ငှရေေးကွေးရေးအရ လှူဒါနျးတာတို့၊ ပစ်စညျးလှူတာတို့၊ အဲဒီဟာတှထေကျ ပိုပွီးအရေးကွီးတာက ကိုယျ့ရဲ့ စှမျးအား၊ ကိုယျ့ရဲ့ အခြိနျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ မတ်ေတာ၊ စတေနာတှကေို ရငျးနှီးပွီးတော့ လုပျပေး တာဟာ အငျမတနျမှ အရေးကွီးပါတယျ။
“မူးယဈဆေးဝါး ပွတျအောငျလုပျတဲ့နရောမှာ စှဲနတေဲ့သူတှေ ဖွတျလိုကျတယျ။ ဖွတျပွီးတော့ အရေးကွီးတာက ဆကျပွီးတော့ မူးယဈဆေးပွတျနဖေို့ပါ။ ပွတျနတေဲ့ အခြိနျကို ထိနျးသိမျးသှားဖို့ပဲ၊ အဲဒါက ခကျခဲပါတယျ။ ကြှနျမတို့ လုံးဝ ပွတျအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ လူဆိုတာ တဈခြိနျ တဈခြိနျမှာ အားကိုးခငျြတဲ့ စိတျလေး တှရှေိလာတယျ၊ တဈယောကျယောကျကို အားကိုးခငျြတယျ၊ တဈခုခုကို မှီဝဲခငျြတယျ၊ အဲဒီလိုဆိုရငျ မူးယဈဆေးဝါးအစား ရပျရှာက မိသားစု၊ မိတျဆှေ အငျအားတှကေ အစား ထိုးပေးရမယျ၊ ဒီမိသားစု၊ မိတျဆှေ အငျအားတှကေို အားကိုးအောငျလို့၊ ယုံကွညျ အောငျလို့၊ မှီခိုအောငျလို့ လုပျပေးရမယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကြှနျမတို့ရဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးကို အခွခေံတဲ့၊ အခွပွေုတဲ့ အားကိုးတဲ့ မူးယဈဆေးဝါး ဖွတျပေးသူမြား ပွနျလညျ ထူထောငျရေးစခနျးကွီးကို ဖှငျ့တာဖွဈပါတယျ။
“ကြှနျမတို့ ပွနျလညျထူထောငျရေးစခနျးမှာဆိုရငျ ပွညျသူတှအေားလုံး ပါဝငျ နိုငျတဲ့ စခနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ပါဝငျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ဘကျစုံပွုလုပျပွီးတော့ ကွိုးစားပွီးတော့ လုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျအရေးကွီး တာက ဒီစခနျးအောငျမွငျဖို့ဆိုရငျ စခနျးကိုလာတဲ့ မူးယဈဆေး ဖွတျပွီးသား ပုဂ်ဂိုလျမြား ဟာ တကယျပဲပွတျသှားပွီလား။ ပွတျသှားပွီး မိမိတို့ရဲ့ ရပျရှာ၊ နထေိုငျရာ ဒသေတှေ သာမက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ တဈတိုငျးပွညျလုံး၊ လူသားအားလုံးကို အကြိုးပွု နိုငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှပွေနျပွီးဖွဈလာနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
“ လလေ့ာမှုစဈတမျးတှအေရ ဆယျကြျောသကျ လူငယျတှပေါ မူးယဈဆေးကို စမျးသပျသုံးစှဲကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကြှနျမသိသလောကျ အမြားစုက စာမေးပှဲ အတှကျ စာကကျြဖို့ ဒီဟာလေးသုံးလိုကျရငျ အိပျမငိုကျဘူး၊ ဘာမှလညျး မဖွဈနိုငျ ဘူး ဆိုပွီး ဆေးအဖွဈ သုံးရငျးနဲ့ တဈလုံးကနေ နှဈလုံး၊ နှဈလုံးကနေ ခွောကျလုံး စသဖွငျ့ မြားမြားလာပွီး ဆေးစှဲတဲ့အထိကို ရောကျသှားပါတယျ။
“တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ ဒီလိုစခနျးမှာလာပွီး မိဘတှကေို ပညာပေးတဲ့ အစီအစဉျတှေ လုပျဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျ့သားသမီးတှကေ ဆေးတှသေုံးစှဲနတေယျ ဆိုရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှေ ဖွဈပျေါနလေဲ၊ ဘယျလိုပုံစံတှေ ပွောငျးလဲနလေဲ ဆိုတာ ကို အမွဲမပွတျ သတိထား စောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလို မူးယဈဆေးဝါး ပွနျလညျ ထူထောငျရေးစခနျးဖှငျ့နိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးကလညျး ဒျေါခငျကွညျ ဖောငျ ဒေးရှငျးက လညျး လှူတာဆိုပမေယျ့ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးကို လှူနိုငျအောငျ ထောကျပံ့တာ ကတော့ ခကျြသမ်မတနျိုငျငံက ဖွဈပါတယျ။ ခကျြနိုငျငံဆိုတာဟာ မွနျမာ နိုငျငံ အပျေါမှာ မိတျဆှအေဖွဈ ဆကျဆံခဲ့တာ နှဈပေါငျးမြားစှာရှိပါပွီ။ ကြှနျမတို့နိုငျငံရဲ့ အခကျအခဲ တှကေို အမွဲတမျး နားလညျစှာနဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ ဆောငျရှကျ ကူညီပေးတဲ့အထဲမှာ ခကျြနိုငျငံပါပါတယျ။ ခကျြနျိုငျငံဟာ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးက တခွားနရောတှမှော ဖှငျ့ဖို့အစီအစဉျအနေ နဲ့ မူးယဈဆေးဝါးဖွတျသူမြားစခနျးတှေ အတှကျလညျး လှူဒါနျးဖို့ အစီအစဉျတှေ ရှိပွီး ပါပွီ။ လူငယျ၊ လူလတျတှရေဲ့ဘ၀တှေ ပွနျလညျ ထူထောငျ ရေးအတှကျ စတေနာ အပွညျ့အဝနဲ့ ကူညီတဲ့ မိတျဆှေ နိုငျငံရဲ့ သံအမတျကွီးကို ကြေးဇူးတငျတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ဘယျလုပျငနျးပဲဖွဈဖွဈ အမွနျအောငျမွငျ ဖို့ဆိုတာ ပွညျသူလူထုရဲ့ ပါဝငျပတျသကျဖို့လိုပါတယျ။ ပွညျသူ လူထုက တကျတကျ ကွှကွှနဲ့ ပါဝငျပတျသကျမှု မရှိရငျ ဘယျလုပျငနျးမှ မအောငျမွငျနိုငျ ပါဘူး။ ဘယျအစိုးရ ကမှ ပွညျသူလူထုရဲ့ ထောကျပံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ အောငျမွငျမှုမရနိုငျပါဘူး။ ဘယျလောကျဘဲ အတျောဆုံးလူတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အစိုးရဖွဈစပွေညျသူလူထုရဲ့ ထောကျပံ့မှု၊ ကူညီ ဝိုငျးဝနျးမှုနဲ့သာ အောငျမွငျမှုရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီပွနျလညျ ထူထောငျရေးစခနျး ဆိုတာကလညျး မွဈကွီးနားပွညျသူလူထုရဲ့ ဝိုငျးဝနျးကူညီထောကျ ခံမှုတှနေဲ့သာ မူးယဈဆေးဝါးဖွတျပေးသူမြားကို အကြိုးပွုနိုငျမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားလိုပါတယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျး အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမိုးဇျောဦးက အဆောကျအဦ ဆောကျလုပျလှူဒါနျးရခွငျးနှငျ့စပျလဉျြး၍ ရှငျးလငျးပွောကွားပွီး ပွနျ လညျ ထူထောငျရေးဦးစီးဌာန ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးဝငျးနိုငျထှနျးထံ အဆောကျအဦ နှငျ့ပတျသကျသညျ့ စာရှကျစာတမျးမြားကို လှဲပွောငျးပေးအပျသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ခကျြ သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Jaroslav Dolecek ထံ ကြေးဇူးတငျလှာပေးအပျသညျ။
ထို့နောကျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက ကြေးဇူးတငျစကား ပွောကွားပွီး မူးယဈသံသရာမလညျစရေနျ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျ့ စခနျး အခွပွေု လုပျငနျးစဉျမြားနှငျ့ ရပျရှာအခွပွေု လုပျငနျးစဉျမြားကို ရှငျးလငျးပွောကွား သညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ တပျကုနျး ရပျကှကျ အငျဂနျြဒုံနှဈခွငျးအသငျးတျော နရေပျစှနျ့ခှာပွညျသူမြား ယာယီ ကယျ ဆယျရေး စခနျး၌ ကငျြးပသညျ့ ထောကျပံ့ငှနှေငျ့ ထောကျပံ့ပစ်စညျးမြား ပေးအပျပှဲ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျကွသညျ။
အငျဂနျြဒုံနှဈခွငျးအသငျးတျော ယာယီကယျဆယျရေးစခနျးတှငျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက အားပေးစကားပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ယာယီကယျဆယျရေးစခနျးမှ ကိုယျစားလှယျမြားထံ ငှကေပျြ ၃၈၇၇၇၅၀ တနျဖိုးရှိ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆားနှငျ့ ပဲတို့ကို ပေးအပျလှူဒါနျးသညျ။
ဆကျလကျ၍ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးရဲအောငျက ငှကေပျြ ၁၅၀၀၀၀ ကိုလညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက အမြိုးသမီး ဦးဆောငျမိသားစုမြား၊ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား၊ ၅နှဈအောကျကလေးမြား၊ မသနျစှမျးမြား နှငျ့ အသကျ ၈၅ နှဈအထကျ အဘိုးအဘှားမြားအတှကျ ထောကျပံ့ငှေ ကပျြ ၁၈၅၀၀၀၀ ကိုလညျးကောငျး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာခကျအောငျက စာရေးကိရိယာမြားနှငျ့ ကြောပိုးအိတျမြားကို လညျးကောငျး ထောကျပံ့ပေးအပျကွရာ စခနျးတာဝနျခံနှငျ့ ကြောငျးသား ကြောငျးသူလေးမြားက လကျခံရယူကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျသညျ စခနျးအတှငျးရှိ လူနဆေောငျ မြားနှငျ့ ဈေးဆိုငျမြား ဖှငျ့လှဈရောငျးခနြမှေု အခွအေနမြေားကို လှညျ့လညျကွညျ့ရှုကွ သညျ။
ယာယီကယျဆယျရေးစခနျးမြားသို့ ရောကျရှိစဉျ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ က အားပေးစကားပွောကွားရာ၌ “အဓိက ရညျရှယျခကျြကတော့ အားလုံးက ကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရှာမှာ ပွနျပွီးတော့ အေးအေးခမျြးခမျြးနနေိုငျဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီစခနျးတှေ ကို ထူထောငျထားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှရေော၊ ပံ့ပိုးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှရေော အစိုးရအပါ အဝငျ အဓိက တာဝနျတဈခုကတော့ ဒီစခနျးမှာရှိတဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှေ တဈခြိနျ တဈခါ ကွရငျ မိမိတို့ရဲ့နရေပျမှာ အေးအေးဆေးဆေး၊ ခမျြးခမျြးသာသာ တိုးတကျစှာ နသှေားနိုငျ ဖို့ပွငျဆငျပေး ဖို့ဖွဈပါ တယျ။ ဒီလိုစခနျးတှကေိုလာတယျဆိုတာ တခဏပဲ လို့ စိတျထဲမှာ ထားစခေငျြတယျ။ တဈခြိနျတဈခါမှာ တို့ရပျရှာတှကေို ပွနျလညျပွီး တော့ ထူထောငျမယျ၊ ငွိမျးခမျြးရေး အတှကျ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေးအတှကျ ဖှံ့ဖွိုးရေး အတှကျ ဝိုငျးလုပျမယျ၊ အဲဒီလိုစိတျတှကေို မှေးဖို့ အငျမတနျမှ အရေးကွီးပါတယျ။
“ဒီလိုစခနျးတှမှော ပညာရေးနဲ့ ကနျြးမာရေးကိုပိုပွီးအလေးထားပါတယျ။ ပညာ ရေးဆိုတာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခှနျအားအတှကျ၊ ကနျြးမာရေးဆိုတာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ခှနျအားအတှကျ ဘယျသူမဆို လူသားတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော အငျအားပွညျ့ဖို့က အငျမတနျမှ အရေးကွီးပါတယျ။
“စခနျးထဲမှာရှိတဲ့ ပွညျသူတှေ အထူးသဖွငျ့ လူငယျတှကေို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အငျအားဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ အလေးအနကျထားပွီး လုပျဆောငျစခေငျြ တယျ။ လိုအပျတဲ့အကူအညီတှကေို အစိုးရအဖှဲ့ကို တောငျးစခေငျြပါတယျ။ ဒါကတော့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာဘကျကပါ။ နောကျပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ ပညာရေးဘကျနဲ့ နညျးနညျး ဆကျစပျ နတောကတော့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုပါ။ ကလေးမြားကို ကိုယျလကျ လှုပျရှား မှုဘကျမှာ အားပေးစခေငျြပါတယျ။ ဘယျလိုပဲပွောပွော တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနပွေီး အားပေးစခေငျြပါတယျ။
“အားကစားဘကျတငျမကဘဲ အနုပညာ ဂီတဘကျကိုလညျး အားပေးစခေငျြပါ တယျ။ ကိုယျကနျြးမာဖို့လညျးလိုတယျ။ အနုပညာစိတျဓာတျ တှလေညျး ဖှံ့ဖွိုးအောငျလို့ အခှငျ့အလမျးတှပေေးဖို့လိုပါတယျ။ စုပေါငျးပွီး သီခငျြးဆိုတာတို့ စုပေါငျးပွီးတီးဝိုငျးတီး တာ၊ စုပေါငျးပွီးတော့ အနုပညာနဲ့ပတျသကျတဲ့ အလုပျတှေ လုပျတာတို့ဟာ အခငျြး ခငျြးကိုလညျး ပိုပွီးသှေးစညျးစတေယျ။ စိတျခမျြးသာမှုလညျးပေးပါတယျ။ ဒါအတှကျ လညျး အလေးထားပွီး လုပျပေးစခေငျြပါတယျ။
“ဒီနေ့ ဒီမှာလာပွီးတော့ အားပေးစကားပွောတယျဆိုတာလညျး ကြှနျမရဲ့ စိတျ ထဲမှာရှိတာတှေ မြှဝခေဲ့တယျလို့ ဒီလိုပဲ ခံစားပါတယျ။ ဒီလိုစခနျးတှလောတဲ့အခါကမြှ ကိုယျရပျကိုယျ့ရှာစှနျ့ပွီး ရှပွေ့ောငျးလာရတဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှစေိတျထဲမှာ ခံစားမှု တှရှေိသလဲ။ ဒီခံစားမှုတှပြေောကျဖို့အတှကျ ကြှနျမတို့ဟာ ဘယျလို လုပျဖို့ ကွိုးစားနတေယျဆိုတာ အဲဒါတှကေို မြှဝတောပါ။ မြှဝခွေငျးအားဖွငျ့ ဒီပွဿနာ တှကေိုပိုပွီးတော့ ထိထိရောကျရောကျ ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့နညျးတှကေို တှလေ့ာ ကွမှာဖွဈ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့အမွဲပဲ ဝနျကွီးဌာနတှရေော၊ ပွညျနယျ/တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရ တှရေော ပွညျသူလူထုနဲ့ ထိတှမှေု့ အမွဲရှိရမယျဆိုတာ အားပေးပါတယျ။ အမြားစု အတှကျ သာယာမယျ့၊ လုံခွုံမယျ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုကို ဖနျတီးဖို့၊ ပွုစုပြိုး ထောငျဖို့ တို့ကို ဦးတညျတာပါ။
“ကြှနျမတို့အနနေဲ့ ဒီလိုနရေပျစှနျ့ခှာသှားတဲ့ ပွညျသူပွညျသားမြား ဒီလိုစခနျးမှာ နနေရေတာကို လုံးဝမနှဈမွို့ပါဘူး။ အမွနျဆုံးကိုယျ့ရပျကိုယျ့ရပျရှာမှာ အေးအေး ခမျြးခမျြးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစှာ နနေိုငျဖို့အတှကျပဲ လိုလားပါတယျ။ ဒီအတှကျလညျး အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားသှားမှာပါ။ ကွိုးစားတဲ့နရောမှာလညျး ကာယကံရှငျမြား ကိုယျတိုငျ က ဝိုငျးဝနျးပွီးကူညီပေးကွပါလို့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။
“ပွညျနယျအစိုးရကလညျး အငျမတနျမှ အဓိကကပြါတယျ။ စခနျးတှမှော ပွဿနာတှရှေိရငျ ပွညျနယျအစိုးရက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေးစခေငျြပါတယျ။ ပွဿနာရှိတာကို ဖုံးထားလို့လညျး ပွဿနာက ပြောကျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ မကနြေပျမှုတှကေို ဘာမှမပွောဘဲနဲ့ ဖုံးထားလို့လညျး ပြောကျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ လိုအပျခကျြတှရှေိရငျ ပွညျနယျအစိုးရနဲ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆှေးနှေးပေးပါ။ ဆှေးနှေးပွီးတော့ ဒီဟာတှကေို ဖွရှေငျးပေးလို့ရပါတယျ။
“ဒီမှာရောကျနတေဲ့အခြိနျကာလမှာ နောငျကိုယျ့ဘဝအတှကျ နောငျကိုယျ့ ရပျကိုယျ့ရှာကို ပွနျသှားရငျ ကိုယျ့ရှာရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လုပျနိုငျတဲ့အား တှကေို ဒီမှာယူပါ။ လုပျနိုငျမယျ့အရညျအခငျြးတှကေို ဒီမှာရအောငျ လုပျပါ။ ကလေး တှကေိုလညျး ဒီဟာအတှကျကို အားပေးစခေငျြပါတယျ။ ကြှနျမတို့ရဲ့ အနာဂတျဟာ ကလေးတှပေါပဲ။ လူငယျတှေ၊ ကလေးတှဟော မှနျကနျတဲ့စံနှုနျးထားတှရှေိမှ၊ ကိုယျရပျ ကိုယျ့ရှာကို ကူညီခငျြတဲ့စိတျတှရှေိမှ ရရှေညျမှာအေးခမျြးမယျ။ ရရှေညျမှာ ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျမယျ။ ကြှနျမတို့နိုငျငံဟာ ငွိမျးခမျြးရေးအငျမတနျမှ မှတျသိပျ နတေဲ့နိုငျငံဖွဈ ပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေးကို အငျမတနျမှ လိုအပျနတေဲ့နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံ့ရရှေညျ ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ အဓိကအာဟာရက ငွိမျးခမျြးရေးကိုလိုလားတဲ့ စိတျဓာတျပါပဲ။ ဒီလိုစိတျဓာတျတှကေို စခနျးတှမှော သငျပေးမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ စခနျးတှကေို အခွခေံပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားမြားကွားမှာ ညီရငျးအဈကိုစိတျဓာတျ၊ ပွညျထောငျစု စိတျဓာတျတှပှေားမြား လာအောငျလို့ အငျမတနျမှလုပျပေးခငျြပါတယျ။
“အစိုးရဆိုတာ ပွညျသူတှကွေားထဲမှာ ခှဲပွီးတော့ ဆကျဆံလို့မရပါ ဘူး။ ကြောသားရငျသားမခှဲရဘူးဆိုတာ ဒါကိုပွောတာပါ။ ကြှနျမတို့ခဏခဏ ပွောနတေဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယျကတော့ တရားဥပဒအေရ၊ အစိုးရရဲ့ မူဝါဒအရ နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှကွေားမှာ ခှဲခွားပွီးတော့မဆကျဆံရဘူး။ အားလုံးကို တနျးတူညီ တူဆကျဆံရမယျ။ ကြှနျမတို့ ပွညျသူတဈဦးခငျြး တဈဦးခငျြးဟာ တနျဖိုးရှိပါ တယျ။ ပွညျသူတဈဦးခငျြး၊ တဈဦးရဲ့တနျဖိုးတှေ စုပေါငျးပွီးတော့ ကြှနျမတို့ နိုငျငံရဲ့တနျဖိုးဖွဈ လာမှာပါ။
“ဒီစခနျးထဲမှာရှိတဲ့ ပွညျသူပွညျသားအားလုံး ကနျြးကနျြးမာမာခမျြးခမျြး သာသာနဲ့ နနေိုငျဖို့အတှကျ အစိုးရအနနေဲ့လညျး ကွိုးစားသှားပါမယျ။ ပွညျသူ ပွညျသားတှအေနနေဲ့လညျး ပွညျထောငျစုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့နဲ့ ငွိမျးခမျြးသာယာဖို့ အတှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျနပွေီးတော့ ပံ့ပိုးပေးကွပါလို့ မတ်ေတာရပျခံ ခငျြပါတယျ ဟု ပွောကွားသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ အဖှဲ့သညျ အထူးလယောဉျဖွငျ့ မွဈကွီးနားမွို့မှ ထှကျခှာလာရာ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောသို့ ပွနျလညျရောကျရှိကွသညျ။